Iindaba - Impompo yesilicon carbide
Ngenxa yobulukhuni bayo obuphezulu, ukumelana nokuphakama komhlwa kunye namandla aphezulu obushushu, i-silicon carbide ceramics iye yasetyenziswa ngokubanzi. Kukho ikakhulu le miba ilandelayo: i-silicon carbide ceramics inokumelana ne-chemical corrosion, amandla aphezulu, ubunzima obuphezulu, ukumelana ne-abrasion, ukungqinelana okuncinci, kunye nokuchasana kobushushu obuphezulu, ke yinto efanelekileyo yokwenza amakhonkco okutywina. Xa idityaniswe nezinto zegraphite, ukungalingani kwayo kokukhuhlana kuncinci kunee-alumina ceramics kunye nealloys ezilukhuni, ke inokusetyenziswa kumaxabiso aphezulu e-PV, ngakumbi kwimeko yokusebenza yokuhambisa ii-asidi ezomeleleyo kunye nealkalis.
Impompo yesilicon khabhayithi inebulukhuni obuphezulu, amandla aphezulu, iqondo lobushushu eliphezulu kunye nokumelana nezinye izinto, xa kuthelekiswa nobomi benkonzo yempompo yesinyithi eqhelekileyo, kwisikhululo esinye semeko-bume iphindwe kaninzi ixesha lenkonzo okanye elide.
Ukuyilwa kwezinto ezintsha ngokwesayensi kunye netekhnoloji yeyona nto iphambili kukhuphiswano lwamashishini empompo yesilicon khabhayithi. Ngokudodobala koqoqosho lwase China kule minyaka idlulileyo, uninzi lwamashishini okuvelisa anethemba lokuphinda abuye kwezoqoqosho ukongeza kulawulo lweendleko zemveliso. Iingcali zikholelwa ukuba kwimeko yezoqoqosho enzima, abavelisi abafanelekileyo kufuneka bandise ubungqongqo bezenzululwazi kunye nezobuchwephesha, ngelixa zisuka kumgangatho, indleko kunye nophando kunye nophuhliso, kunye neminye imiba yemizamo yokwaphula umthetho.